आफ्नो बाल हरेक महिलाले राय ले हटना चाहनुहुन्छ छैन, विवाद धेरै कारण, धुन कति को प्रश्न। धेरै मानिसहरू हरेक दिन आफ्नो कपाल धोइदिनुभएर सिफारिस गर्छौँ, तर वास्तवमा यो राम्रो भन्दा ठूलो हानि हुन सक्छ। तथ्यलाई पनि बारम्बार स्नान तिनीहरूलाई सुरक्षा कि प्राकृतिक तेल को ताले deprives छ। यो असंतुलन पैदा गर्न सक्छ आफ्नो बाल पनि छिटो भन्दा यो अघि थियो चिल्लो लागेको र फोहोर हुनेछ भनेर। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, बारम्बार लुगा धुने सबै समस्याको समाधान गर्न सकिँदैन।
तर, यो पनि वास्तवमा खातामा लिनुपर्छ भनेर जो सबैलाई व्यक्तिगत लुगा धुने प्रक्रिया संख्या निर्धारण गर्न छ भन्ने हो नै बाल, कुनै दुई मान्छे। यो धेरै हदसम्म कपाल को संरचना र प्रकार निर्भर हुनेछ, त्यसैले जादुई सबै महिला फिट केही सार्वभौमिक सिफारिसहरू खोज्न छैन। आज हामी म आफ्नो बाल प्रकार र कर्ल को बनावट आधारित मेरो कपाल धुनुपर्छ गर्नुपर्छ कति कुरा हुनेछ। सबैभन्दा सुन्दर र स्वस्थ कपाल को मालिक बन्न यी निर्देशन पालना गर्नुहोस्।
तपाईं पातलो कपाल छ भने
ठीक बाल सामान्यतया छिटो zhirneyut र आफ्नो आकार गुमाउनु हो, त्यसैले तिनीहरू हरेक दिन धोए गर्न छ। त्यसैले यो मामला मा, बारम्बार लुगा धुने अझै बढी उपयोगी हुनेछ। एक शैंपू र कंडीशनर छनौट गर्दा ती उत्पादनहरु कपाल बाक्लो र भारी बनाउन प्रतिज्ञा कि ध्यान गर्नुपर्छ। तिनीहरूले सूत्र सजिलो छ, किनभने अरूलाई भन्दा राम्रो तपाईं अनुरूप हुनेछ र भारी बाल नगर्नुहोस्। साथै, यो घटक ठीक बाल लागि पनि भारी छ किनभने, सिलिकन साथ स्याम्पु अप दिन्छ।
तपाईं बाक्लो कपाल छ भने
हेर्न आकर्षक तिनीहरूलाई सधैं चोट छैन रूपमा त गर्न, र बाक्लो वा बाक्लो कपाल, हरेक दुई दिन धोए गर्नुपर्छ। हामी शैम्पू र कंडीशनर कुरा भने ती सूत्रहरू भन्ने Shea घिउ र argan समावेश पक्षमा छनौट गर्नुपर्छ। तिनीहरूले सबै भन्दा राम्रो खोपडी र बाल moisturize गर्न सक्षम छन्।
तपाईं तेल कपाल छ भने
चिल्लो लागेको बाल हरेक दिन धोए गर्नुपर्छ। सायद केही महिला यो गर्न कठिन छ, तर बारम्बार लुगा धुने यो अवस्था गराउँछ जो sebum को overproduction, स्थिर आवश्यक छ। तपाईं वातानुकूलन प्रयोग गर्नुहुन्छ भने समस्या exacerbate छैन ताकि, यो केवल सुझाव मा लागू हुन्छ। साथै, शैंपू र यस्तो टंकशाला, मसलाको र चिया रूख तेल रूपमा कोमल सफाई सामाग्री समावेश कंडीशनर खोज्न।
तपाईं कपाल रङ लगाइएको छ भने
लुप्त होती रोक्न क्रममा, यो sulfates र parabens बिना शैम्पू र कंडीशनर चयन गर्न महत्त्वपूर्ण छ। सामान्यतः हाम्रो किसिमहरु मा फेला, तर रङ लगाउन वा कपाल चमकती को प्रक्रिया मा क्षतिग्रस्त छन् keratins र प्रोटीन राम्रो कपाल प्रतिक्रिया रंगे। आफ्नो कपाल पुनर्गठन गर्न उत्पादनहरु यी घटक को कुनै पनि समावेश, प्रयोग गर्नुहोस्।
तपाईं सीधा बाल छन् भने
सोझो बाल बनावट को devoid, यो तिनीहरूलाई लागि हल्का शैंपू र कंडीशनर चयन गर्न सबै भन्दा राम्रो छ। तिनीहरूले unkempt र घुम्रेको भन्दा चिल्लो लागेको छिटो हेर्न हुनेछ। तिनीहरूलाई स्वस्थ र चमकदार राख्न, तपाईं हरेक दिन आफ्नो कपाल धुन छ। सिवार निकाल्ने, समुद्र नुन र नरिवल तेल मा धनी खाद्य पदार्थ चयन गर्नुहोस्। तिनीहरूले चम्कने र चमक दिन सक्षम हुनेछ।
तपाईं घुम्रेको कपाल छ भने
वेभी र घुम्रेको ताले - यो छ जो अक्सर मात्र हानि धुन कपाल को प्रकार छ। तपाईंले तिनीहरूलाई हरेक तीन वा चार दिन धुन सक्छन्, र त्यो hydrated कर्ल रहन पर्याप्त हुनेछ र यसको आकार गुमाउनु भएन। पनि राम्रो विचार - एक शैंपू तपाईं आफ्नो कपाल धुन जब पहिले र वातानुकूलन पछि प्रयोग गर्न। यो कर्ल को आकार राख्ने मदत गर्नेछ। शैंपू र समावेश argan तेल वा नरिवल तेल कंडीशनर चयन - तिनीहरूले आफ्नो बाल ताजा र जीवनको पूर्ण राख्नुहोस्।
लामो कपाल मा सुन्दर बुनाई
कसरी घर मा आफ्नो बाल straightener कर्ल गर्न?
नुन बाल: peeling लागि एउटा उत्कृष्ट उपकरण
अपराधी कोड को लेख 275। राजद्रोहको र यसको लागि आपराधिक दायित्व
भान्सा भित्री6वर्ग। एम: मरम्मत को subtleties र सिर्जना सान्त्वना
राज्य Duma को उपकरण: इतिहास र संरचना
कार्बन फिलिम, यसको संरचना र आवेदन।
राजमार्ग Schelkovskogo को पुनर्निर्माण: योजना, परियोजना, योजना। मास्को नजिकै पुनर्निर्माण Shchelkovo राजमार्ग सर्तहरू
बवासीर लागि हेपरिन मलम प्रभावकारी छ के?
Neomarika: घर मा हेरविचार, फोटो
दुबई मा अवकाश: Antiquities को एक सानो बिट